Kedu ka m ga-esi mee ka ikpere m kpoo ọkụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Kneegba ịnyịnya na-agba agba ikpere - nzaghachi maka okwu ahụ
Kneegba ịnyịnya na-agba agba ikpere - nzaghachi maka okwu ahụ
Kedu ka m ga-esi mee ka ikpere m kpoo ọkụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè?
Ndụmọdụ dị elu bụ iyi uwe,ikperema ọ bụ kpoo ụkwụ mgbe ọkụ dị 65F degrees (18C) ma ọ bụ ala. Ikpuchi ihe na-echebe gịikperema debe mọzụlụ gịkpoo ọkụ. Enweghị ọghọm dị na yaIdebenke giụkwụkpuchie n'ihu n'ime oge opupu ihe ubi.
emeju maka ịgba ígwè
Ndewo, a bụ m Phil Burt na abụ m onye isi physio na British Cycling maka afọ 12 ma nyere aka melite Team Sky. Nke a ga-abụ edemede izizi anyị gbasara ịgba ịnyịnya ígwè na mmerụ ahụ. Mana ka anyị buru ụzọ lee anya n’ịgba ịnyịnya ígwè dị ka egwuregwu na profaịlụ mmerụ ahụ ya ka anyị wee ghọta ya nke ọma.
Ihe mbụ ị ga-ekwu bụ na ịgba ígwè bụ obere egwuregwu mmerụ ahụ. Mgbe i chere echiche banyere ya, gịnị bụ ihe mbụ mmadụ na-eme mgbe ha merụrụ ahụ́? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga ije, onye na-agwọ ọrịa n'ahụ gị ga-etinyekarị gị n'ụgbọala. Mee ịwa ahụ ikpere - ihe mbụ ị na - eme bụ ịgba ịnyịnya ígwè.
Kedu ihe kpatara na ọ bụrụ na anyị aghọta nke ahụ. Nke ahụ bụ n'ihi na enweghi ike ike ọ bụla ijikwa mgbe ịnyịnya ígwè - ọ bụ egwuregwu abụọ, ọ bụghị akụkụ atọ dị ka bọọlụ, ebe ị na-agba ọsọ ọsọ ma gbanwee ụzọ, yabụ enwere ike na-adịghị emerụ ahụ na ya, ọ dịkwa mma n'ihi ka anyị niile na-aka nká ma na-aka nká, otu ihe anyị nwere ike agaghị enwe ike ịme bụ marathons mana ị na-ahụ ọtụtụ ụmụ nwoke 70 afọ na-agba ịnyịnya ígwè n'ezie siri ike na ọ bụ ya mere. Ka o sina dị, enwere mmerụ ahụ ịgba ígwè.
Gịnị bụ n'elu 3? Ikpere, ubu na ala azụ. Ya mere, ka anyị buru ụzọ wepụ ubu anyị. Ihe mere o jiri pụta oke na ya bụ na mgbe ndị mmadụ na-ada anyịnya igwe, ha na-agbaji isi olu ha.
Ga-ada n'ụgbọ ịnyịnya ígwè gị, ọ dị elu karịa ọnọdụ na-agba ọsọ ma ị daa na aka gbatịrị agbatị na ọkpụkpụ ahụ na-ewere ya na ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-agbaji. Ọfọn, anyị ga-ahapụ nke ahụ ugbu a, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịbanye na nke ahụ na otu ụbọchị na otu ị ga-esi gbakee na ya. Ndabere azụ bụ isiokwu dị iche iche kpamkpam, yabụ taa, anyị ga-ebute ọnya ọnya ịnyịnya ígwè bụ ikpere.
Ikpere. Ya mere, ihe anyị ga-ekwu maka ya: Gịnị kpatara ikpere ji bụrụ nkwonkwo kachasị emerụ ahụ mgbe ị na-agba ịnyịnya? Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-ele igwe kwụ otu ebe, a na-akwado nkwado anyị na pelvis nke ọma site na sadulu ahụ, ụkwụ anyị na nkwonkwo ụkwụ anyị na-agbanye kpamkpam na pedal, ọ bụghị n'oge na-adịghị anya na akpụkpọ ụkwụ carbon fiber. Thekwụ dị ụtọ, nkwonkwo ụkwụ ya nwere obi ụtọ, enweghi ọtụtụ ihe a ga-eme iji chịkwaa (ma ọ bụghị ịgba ọsọ ebe ala na onye na-enye ọzụzụ, mkpịsị ụkwụ apụ) ọ dị oke ikuku dị mfe ikpere, ọ na-achịkwa ike niile nke otu nnukwu ahụ abụọ dị na ahụ: mmegharị gị na quads gị.
Mgbe ị na-agagharị na ya, ikpere na-ebufe ike niile azụ na azụ wee bụrụ ihe na-emebi emebi, yabụ ọbụlagodi na ị na-agagharị na 80 RPM ọ na-agbakwunye ọtụtụ puku ntụgharị - ntụgharị ụkwụ - ebe ikpere gị na-aga site na nke a nkwagharị ụkwụ n'oge ogologo njem. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji dị oke mkpa; Cleat, pedal, sadulu elu, tọgharịa. Nwa nwoke a buru oke ibu.
ndu ịkpa igwe
Ma lee ikuku ikuku nke ikuku - ezigbo mma maka ikpere gị. Ọ bụrụ na ị bịakwutere m wee nwee mmerụ ikpere, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnwe ịnyịnya ígwè, ịgba rugby ma ọ bụ ọrụ netball, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè, ọ bụrụhaala na ị nwere nhazi ziri ezi, n'ihi na ihe mbụ ọ bụla na-agwọ ọrịa na-eme bụ gị tinye igwe kwụ otu ebe iji nyere ikpere gị aka na mgbatị. Mana ọ bụrụ n’inwee ya, ị nwere ike ịnwe mmerụ ikpere.
Yabụ na enweghị m gị, mana achọrọ m inyere gị aka, kedụ ihe m ga-agwa gị nke nwere ike inyere gị aka? Na na na, ihu ọma, mgbe ị na-enwe ihe mgbu na azụ nke gị na ikpere, a nnọọ, ihe na-akpatakarị bụ na gị sadulu dị elu na ị ga-eru tere na pedal. Ya mere lelee ghaa n’elu gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu ihu nke ikpere, na ikpere ikpere, ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara ya maka sadulu dị oke ala.
Anyị maara nke ahụ site na nyocha dị mma. N'ụzọ bụ isi, ikpere ikpere na-eme ka enwekwu nsogbu site n'ịnọdụ ala ma nwee ike ibute mgbu ebe a. Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu na mpụga ikpere gị na-abanye n'ime ya, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na akwara ụbụrụ gị - nnukwu akwara dị na mpụga apata ụkwụ gị - na-esiwanye ike.
Ugbu a ọ na-esikwu ike, ị nwere ike ịgwọ mgbaàmà ya ma mee ka ọ dịkwuo mma site na ịpị teepu ITB gị na ụfụfụ, na-atọpụ mmegharị gị nke nwere ike ịchọ nduzi physio. Can nwere ike ịnwale nke gị, mana mara mma na-ejikarị mgbu ligament iliotibial ma ọ bụ n'ime mgbu ikpere ikpere nke ndị mmadụ na-enwetakarị mgbe ha na-agba ịnyịnya n'ihi na ligament iliotibial na-adọta ikpere ikpere na kneecap n'ụzọ nke na-abụkarị n'ihi biomechanics. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ele onwe gị anya ugbu a ma na-agagharị na ime ụlọ ahụ, ọ bụrụ na ị na-eje ije dị ka ọbọgwụ na ụkwụ gị gbatịrị agbatị, na ị nọ na usoro pedal siri ike dị ka Shimano ma ọ bụ anya nke na-enye ohere obere nnweta na nke ahụ ụzọ, mgbe ahụ nke a ga-abụ mkpagide oge niile na-eduga na mgbu ikpere.
Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya ma sie ike, mana enwere ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ịgba ịnyịnya ígwè hà bara uru?
Ha bara uru n'ezie maka ịnyagharị n'ugwu. N'ihu nke ogologo, chi Chil a ụzọụkwụ na-ekpo ọkụnwere ike ibu chukwu n’agha. Ga-ahụkarị ndị na-anya ụgbọ ịnyịnya na-ekpo ọkụụkwụ na-ekpo ọkụ, naanị iwepu ha tupu ha abanye na akara mmalite.Eprel 1 2021
Ọ bụ oge siri ike nke afọ, ị maghị ihe na-echere gị mgbe ị na-apụ n'ọnụ ụzọ, ee ọ ka kwa, ka m kwuo na m hụrụ ndị enyi anyị America n'anya Ọfụma m gbalịsiri ike ịmata ihe m ga-eyi uwe n'oge kachasị mma, nke ahụ eji ejiji? Na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-apụ nri abalị wdg na ihu igwe na-agbanwe agbanwe na ngwakọta na nke ọma, nke ahụ na-ewe ya n'ọkwa ọzọ niile yabụ enwere m obi ụtọ ịgwa gị na taa enwere m enyemaka nke G Siena Spaniels Maya Amaya, daalụ, maka isonye m taa, ee, ekwenyere m na oge mgbụsị akwụkwọ siri ike ịkwaga, ọkachasị na azụ n'ihi na ị nwere ike, ị nweghị ike ịgbanwe echiche gị, ee, yabụ taa anyị na-ewetara gị ekele maka ndị enyi na ndị mmekọ anyị ihendori ma ọ bụ ihe ị ga-eyi maka mgbụsị akwụkwọ Dgba Uwe Uwe ejiji maka amaghị ama Gịnị bụ azịza ya? Ọtụtụ nhọrọ n'oge a n'afọ. Ihe kachasị bụ na ịkwesighi ịkpọ oku ahụ tupu ị gaa n'ọnụ ụzọ ma ọ dịghị mkpa ka ịnwe ụgbọ ala nkwado ma ọ bụ ụgbọala na-adọkpụ ka gị wee kwuo na ọ dabere na ebe ị bi, n'ezie, mana ị agaghị anụ mkpọtụ nke ndị India, yabụ ọ bụrụ na ihu igwe dị mma ma ọ bụ na ị bịara maka ọsọ ọsọ ehihie mgbe ahụ ịchọrọ ịdebe ihe dị mfe ma dịkwa mfe n'ụzọ ụfọdụ, uwe elu uwe, jersey na otu uwe elu ga-arụ ọrụ ahụ, mana ijide n'aka na ị dị nkwadobe maka ọnọdụ mgbanwe nke ihu igwe ọ dị mma ịnwe mpempe akwụkwọ na-enweghị aka dịka akpukpo anụ n'ihi na mgbe ọ dị jụụ dị ka ụtụtụ ọ na-eme ka ahụ gị dị ọkụ ma mgbe anwụ na-acha ọ na-enyere ahụ gị aka ịpụ ọsụsọ na ị nọ ebe kwesịrị ekwesị Sarah na ọbụlagodi na ị ga-apụ n'isi ụtụtụ, ọ dị ntakịrị, ma eleghị anya ị ga-achọ ntakịrị karịa, ọ bụrụ na ị ga-aga tupu ọwụwa anyanwụ mgbe ahụ ị nwere ike ịchọrọ ihe dịka ogwe aka na beeches n gauntlets na ọ bụ naanị chebe akpụkpọ gị ma were oyi pụọ na nke kacha mma t bụ na enwere ike iwepụ ha ngwa ngwa mgbe ị kpoo ọkụ ka ị wee wepụ ha ọbụlagodi mgbe ị na-anya ụgbọ ala Ugbu a aghụghọ na ogwe aka na-ekpo ọkụ na ụkwụ na-ekpo ọkụ anaghị adị mma, mana ọ bụ ezi echiche itinye ha n'ihu etinye na nịịka gị na gị leotard naanị ya mere ha ji n'aka na ha dabara n'ezie mma na iwepụ na mgbe ị chọrọ iwepụ ha, ha ga-abụ obere ezu na ị nwere ike dabara ugbu a n'ezie na gị jersey n'akpa uwe m na-eyi na ogwe aka warmers na mbụ ọdịda size ma na-eme ka m ụkwụ free na mgbe ahụ mgbe ọ na-akawanye obere oyi na m ahụ ịgbakwunye ụkwụ warmers, laghachi na isi, nke a bụ mpaghara na-eme nnukwu ihe dị iche na-eme, n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-ekpo oke ọkụ ma ọ bụ oke oyi ọ na-ewe ogologo oge iji kwụsie ike, ya mere tinye uwe ma ọ bụ jelii ahụ, ọ na-eme ihe dị iche na ọ bụ mpempe mmiri kachasị amasị m ja ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị ga-enwetụ obere ọkụ ị nwere ike mepee ya n'ihu ma ị nwere ike n'ezie ọ dị ka ọtụtụ n’ime ha n’ezie dabara n’akpa gị pere mpe ka ị nọ Akpa r juputara na nri ka i no na LongSleeve Jersey bu nani ihe mgbe ị no na igwe kwụ otu ebe, igaghi enwe ike igbanwe nhọrọ gi dika i biara bu ebe ha no n’okpuru ma tinye ya n’akuku ma tinye ya n'akpa uwe gị, na m maara ọnọdụ ndị anyị na-ekwughị banyere nke dị mwute na ọ ga-abụ na ọdịda bụ mmiri ozuzo na nke ahụ bụ n'ihi na mụ na m abụọ na-eme ike anyị niile iji zere ya, mana oge ụfọdụ ị ga-apụ ma im Mmiri na-agba ịnyịnya mmiri ma ọ bụ ikekwe ijide onwe gị nwa oge, yabụ ọ bụ ezigbo echiche ịnwe jaketị anaghị egbochi mmiri ma ị ga - ahụ naanị ndị pere mpe dabara n'ezie n'akpa azụ gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị banyere, ị nweghị jaket ma ọ bụ achọghị iyi ihe ọ bụla dị arọ mgbe ahụ mmiri na-enweghị mmiri ma ọ bụ rụọ ezigbo ọrụ ma ọ dịkarịa ala na-eme ka isi gị kpoo ma na-eme ka mmụọ gị dị elu ka i wee nwee ike ịla n'ụlọ wee saa mmiri ọkụ anyị nwere akụkụ ndị ahụ kachasị mkpa. kpuchie, mana anyị ga-atụlekwa mpụta. Otu n'ime ọkacha mmasị m kachasị mma bụ isi ọkọlọtọ.
Ọ dị mma mgbe ọ dị ntakịrị ọkụ n'ihi na ị nwere ike idebe ya n'isi gị ma ọ na-egbochi ọsụsọ n'anya gị ma ọlị na ị ga-ewepụ ya iji kpuchie ntị gị ma ọ na-akwụsị ịdọta ifufe wee soro gị isi Ugogbe anya maka anwụ dịkwa ezigbo uru n'oge oyi nwere ike ịgafe anya m ụfọdụ n'ihi na ha na-echedo anya gị pụọ na apịtị na mmiri wee gbaa n'okporo ámá. Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na nsọtụ abụọ nke ụbọchị ị nwere ọkụ a na-acha ọkụ ọkụ n'oge mgbụsị akwụkwọ na ọ siri ike ịhụ na ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-anya mgbe anyanwụ dara ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ ka gị na gị nwee ugogbe anya maka anwụ. gloves Zere ka o kwere mee n'ihi na ọ ga-amasị m ịnwe brekị n'ụgbọ ịnyịnya ígwè m, mana n'oge mgbụsị akwụkwọ ị na-achọkarị ihe nchebe ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị n'etiti, m na-enye Gloveyeah na-enweghị aka, ana m ewetakwa ụzọ ọzọ uwe aka na azụ m, ọ bụrụ na ọ na-atụ oyi ma ụkwụ gị adaa, mgbe ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ m ga-asị na ị nwere ike ịdabere na sọks sọks dị mma iji mee ka ụkwụ gị kpoo ọkụ, mana ọ bụrụ na ị nwere oyi ma ọ bụ a otutu mmiri ozuzo, ọ bụ eleghị anya, kwesịrị itinye ego na a ụzọ ochie akpụkpọ ụkwụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-aga tere n'ime H vingkwọ ụgbọala n'oge oyi ọnwa ee ọ bụ na-ọ bụ ezi echiche iji nweta a saddlebag niile nke ndị mmezi n'ígwé otú ị nwere ike ịtọhapụ akpa gị ma tinyekwuo ihe na n'ihi na ọ na-adị mkpumkpu ọ dị ezigbo mkpa inwe ọkụ ole na ole Inwe ịnyịnya ígwè gị ka ị ghara igbutu ya n'ọchịchịrị, mana jiri obere atụmatụ na-aga n'ihu, lelee amụma ihu igwe ma jiri mgbanwe ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ nke ukwuu na-agba nke ọma na ọdịda ma echefula ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, nye ya aka Nye anyị mkpịsị aka aka Echefula ịbanye na pịa na ụwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otu nkuzi nke igwe kwụ otu ebe pịa ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ GTN Drift Challenge na otu Charles Barkley ị ga-ahụ nke a ebe a
Ndị ikpere ikpere ọ bara uru?
Onye na-ahụ maka ahụ ike bụ Sean Burke gwara anyị na enwere ihe akaebe na oyi na-ebelata 'mgbanwe nke anụ ahụ dị nro yana ohere nke imerụ anụ ahụ ahụ,' yabụikpere ikperenwere ike inye aka mee ka ihe niile na - agagharị otu o kwesiri.Mar 16 2017
Gịnị bụ ihe kacha mma ịgba ịnyịnya ụkwụ?
Linggba ọsọ kacha mmaogwe aka,ụkwụ, naikpere ikpere
Endura Xtract ogwe akaọkụ.
Castelli Nanoflex + Ogwe akaNdị na-ekpo ọkụ.
Endura WindchillIkpere ikpere.
Njem ChronoIkpere ikpere.
GripGrab Aquarepel Kwesiri Ogwe aka naWarkwụ na-ekpo ọkụ.
Pearl Izumi Elite Ọgba aka naWarkwụ na-ekpo ọkụ.
dhb Aeron Rain Defense Arm andWarkwụ na-ekpo ọkụ.
Nwere ike ị na-eyi ndị na-ekpo ọkụ n'ụkwụ ịnyịnya ígwè?
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma.Ndị na-ekpo ọkụ na-emena-amị amị ntakịrị na ikpere, mana n'eziokwu hameeagbanyeghị. Gaa maka ya. Naanị ihe mnwere ikena-atụ anya ịdị iche nwere ike ịbụ na roba dị ka band nke a gụnyeren'imenjedebe ha iji gbochie ha ịpụpụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na gịjisie ikekarịa na akpụkpọ.
ọgwụgwọ ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ
Kedu ka m ga-esi mee ka ikpere m kpoo ọkụ n’oge oyi?
Agbaji a ajirija ọkụ, mgbe ahụ gbatịa iji nyere akajigideagagharị ma belata nkwonkwo nkwonkwo. Nọrọkpoo ọkụ.Ikperedị ka barometers na oyi na-atụ, mmiri mmiri ihu igwe nwere ike ime ka ha nwekwuo mgbaàmà. GbalịaIdebenke giikpere na-ekpo ọkụjiri aka uwe neoprene ma ọ bụikperekechie.
Kedụ ka ị ga-esi were kpoo ụkwụ 2020?
Warmkwụ na-ekpo ọkụkachasị mma jikọtara ya na sket, obere mkpịsị aka,leggings, na obere akpụkpọ jeans. N'ihe gbasara ederede ma ọ bụ ụdị ejiji, ị nwere ike ịhọrọ ndị nwere waffle ma ọ bụ atụmatụ flannel mana eriri eriri ma ọ bụ usoro Argyll bụ nkecha.
You na-eyi uwe ịgba ịnyịnya n'elu ma ọ bụ n'okpuru obere uwe?
azịza ya bụ naị kwesịrịMgbe nileyikwasị ịgba ịnyịnya ígwè IHEelu nkegba ígwè. Ihe kpatara ya bụ: ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nkegba ígwènwere mpempe ụfụfụ (nke a makwaara dị ka chamois ma ọ bụ chammy) kwụ ọtọ ozugbon'okpurugị, er, 'undercarcar'.09/26/2020
You na-eyi ndị na-ekpo ụkwụ n’ọkụ ma ọ bụ n’okpuru mkpirisi ịnyịnya ígwè?
- Robert M. Onye Nchịkwa Fred Matheny zara, sị:Yiri ndị na-anụ ọkụ n’okpurunke gimkpirisi ụkwụ. Etinyenanke ginịịkana sọks mbụ, wee tụgharịa nanịịka. Rịba ama na ndị na-ejide onwe ha na-ejide akpụkpọ (na-abụghị ntutu), nke bụ otu n'ime ihe kpatara ụfọdụndị na-agba ịnyịnya ígwèkpụọ haụkwụ.
Ngwunye ikpere ma ọ bụ aka uwe ka mma?
N'izugbe,ikpere ikperena-ahọrọ ya site na powerlifters, manaUwe ikperendị Cross-Fit obodo na-eji n'ihi na ha na-enyere aka na mgbake. Mee ka ihe mgbaru ọsọ gị dị mma na-eduzi mkpebi gị.
Kedu ikpere ikuku kachasị mma maka ịgba ígwè?
A na-enyocha ndị na-agba ịnyịnya ígwè kachasị mma na ikpere ikpere. 1 Castelli NanoFlex ụkwụ na-ekpo ọkụ. Nyocha nyocha: 9/10. Onye ndu ahia, ndi na-ekpo oku NanoFlex bu ndi a ma ama maka inye nkasi obi, ikpo oku na nchedo 2 Sportful NoRain Knee Warmers. 3 GripGrab Omuma ndi ozo di egwu. 4 AssoslegWarmer_evo7. 5 dhb Na-achịkwa ọkụ ikpere ọkụ. Ihe ndị ọzọ
Kedu ihe ị chọrọ iji kpoo ụkwụ n'ụgbọ ụkwụ?
Inwe otu ụzọ na-ekpo ọkụ ụkwụ ị nwere ike ịchapụ na ihe dị na akpa jersey bụ nhọrọ dị ukwuu. Ha bara uru n'ezie maka ịnyagharị n'ugwu. N'ihu ogologo ogologo, oyi oyi, otu ụzọ na-ekpo ọkụ ụkwụ nwere ike ịbụ chi. Ga-ahụkarị ndị ọkwọ ụgbọ ụkwụ ọkachamara na-eme ka ahụ dị ọkụ na ụkwụ, naanị iwepụ ha tupu ha ebute akara mmalite.
Kedu ụkwụ ụkwụ kacha mma maka ihu igwe oyi?
Igwe Knee Kachasị Mma na Legkwụ Maka Okpomọkụ Nzuzo. 1 Assos LegWarmer_EVO7. Agbalịrị m ọtụtụ ndị legwarmers, ma mesoo ọtụtụ ụkwụ soseji, ruo mgbe m sụrụ ngọngọ na Assos Legwarmer_EVO7. Kama 2 Pụrụ iche Therminal 2.0. 3 Pactimo Alpine Kwesịrị Igwe Igwe Na-agba Igwe. 4 Peel Izumi Elite Igwe Kwesịrị Ekwesị.